A mara Mwakpo Gọọmentị Hungary na Ndị Ọrụ Okporo Airgbọelu ama
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » A mara Mwakpo Gọọmentị Hungary na Ndị Ọrụ Okporo Airgbọelu ama
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Hungary na -agbasa akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A machibidoro ndị ọrụ ụgbọ elu ụgbọ elu na ndị na-eweta ọrụ ụgbọ njem Hungary (ANSP) - HungaroControl ịhazi iku ọ bụla.
Ndị ọrụ ụgbọ njem Europe na -arịọ European Commission arịrịọ.
Iwu abụọ megidere iwu nke gọọmentị Orban nyere.
ETF na -akatọ nnyonye anya sitere n'aka gọọmentị Hungary na inye ọrụ ụgbọ elu.
The European Federation of Workers 'Federation (ETF) zigara akwụkwọ ozi na Ụlọ ọrụ European Commission (EC) Onye isi ala, Ursula von der Leyen, nye Kọmishọna EU maka ọrụ na ikike mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Nicolas Schmit na Kọmịshọna EU maka Ụgbọ njem, Adina VALEAN, na -arịọ ka EC mee ngwa ngwa kwụsị ihe yiri ka ọ bụ ikpe ọzọ nke imebi iwu. iwu nke gọọmentị Hungary na kwa, ọnọdụ doro anya nke njikọta n'etiti otu ndị otu EU.
Mgbe ọ na -agwa ndị isi EC okwu, ETF na -ekwupụta oke nchegbu ya gbasara ọnọdụ siri ike nke ndị ọrụ ụgbọ elu na Hungarian Air Navigation Service Provider (ANSP) - HungaroControl - nke amachibidoro ugbu a ịhazi ọrụ ọ bụla, dabere na iwu abụọ megidere iwu. Ọchịchị Orban.
Nke a bụ ihe iyi egwu doro anya megide ndị na -ahụ maka ụgbọ elu si Hungary, ETF kwuru n'akwụkwọ ozi e degaara ndị Kọmishọna EU. Ọ bụghị naanị na iwu ahụ kagburu mkpebi ahụ 2.Mpkf.35.080/2021/5 nke Ụlọikpe Mkpegharị nke Hungary kamakwa ọ na -emebi edemede 28 nke Akwụkwọ ikike nke isi ikike nke European Union.
ETF na-akatọ nnyonye anya dị otú ahụ site na Gọọmentị Hungary n'ime inye ndị ọrụ ụgbọelu ikuku na imepụta ọnọdụ ọrụ ọjọọ nke na-eme ka nrụgide nrụgide dị n'etiti ndị ọrụ ụgbọ elu na-ebute oke nsogbu na ndị na-eme njem, ndị ọrụ na ụmụ amaala.